“Premier League ayay saameyn doontaa iyo waliba mushaaraadkeena, intaa oo kaliya ma ahanee waxay kaloo saameyn doontaa….” Fabregas oo walaac ka muujiyay go’aankii uu Ingiriiska uga baxay Midowga Yurub – Gool FM
“Premier League ayay saameyn doontaa iyo waliba mushaaraadkeena, intaa oo kaliya ma ahanee waxay kaloo saameyn doontaa….” Fabregas oo walaac ka muujiyay go’aankii uu Ingiriiska uga baxay Midowga Yurub
(London) 26 Juunyo 2016. Cesc Fabregas ayaa daaha ka rogay cabsidiisa ku aadan go’aankii uu Ingiriiska uga baxay midowga Yurub wuxuuna sheegay in midaa darteed uu u dhibtoon karayo horyaalka Premier League.
52-boqolkiiba ayay codeyntu ku soo baxday inay ka baxaan midowga Yurub iyadoo uuna David Cameron jimcihii iska casilay xilka Raysul Wasaaraha dalka Ingiriiska.
Fabregas oo isagu markii labaad ku soo laabtay Ingiriiska ayaa aaminsan in Premier League ay ku adkaan doonto inuu soo jiito ciyaartoy sababo ka dhalanaya isbadelka dhaqaalaha.
“Waa go’aan niyad jab leh,” Cesc ayaa sidaa yiri mar uu ka hadlayay shirka jaraa’id ee ka horeeya kulanka uu xulkiisa Spain la yeelan doono Talyaaniga berito wareega 16-ka ee Euro.
“Shaqsi ahaan waxaan u arkaa khalad, ma aan filanayn, Sariirta ayaan aaday anigoo niyad-san waxaana la soo kacay akhbaartan.
“Waxaan u maleynayaa inay wax yeelaneyso Premier League, way adkaan doontaa in ciyaartoy lala soo saxiixdo, mushaaraadku wuu isbadeli doonaa haddii ay lacagaha Pound-ka ku dhawaado Euro.
“Waa go’aan abuuri doona dhibaatooyin badan, ma ahan kubbada cagta oo kaliya, laakiin sidoo kale nolol maalmeedka iyo mustqablka ummada.”.
GOTHENBURG RAMADAN CUP: Koobka Ramadaanka oo nus-dhamaadka soo gaaray, kooxaha soo baxay & Sawiradda